केपी ओली समूहले भीम रावललाई उनकै गृहजिल्लामा पछारे , गुमाए रावले आफ्नो साख - Sampurnab Khabar
केपी ओली समूहले भीम रावललाई उनकै गृहजिल्लामा पछारे , गुमाए रावले आफ्नो साख
अछाम- नेकपा (एमाले)का नेता भीम रावलले आफ्नै जिल्लामा साख गुमाएका छन्। अछामको अध्यक्षमा अध्यक्ष केपी ओली समूहका प्रत्यासी चन्द्रबहादुर बोहरा ४३१ मत ल्याएर वियजी भएका छन् ।
केपी शर्मा ओलीसँग अध्यक्षका प्रतिद्व’न्दी भीम रावल पक्षका उम्मेद्वार प्रकाशबहादुर शाहलाई एकसय २५ मतले पछि पार्दै बोहरा अध्यक्षमा विजयी भएका हुन् ।
खसेको ७५० मतमा शाहले ३०७ मत ल्याएर अध्यक्ष पदमा प’रा’जित भएको निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ । बोहरा ओली र शाहले रावल पक्षमा प्यानल नै बनाएर निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए ।
उपाध्यक्षमा शाह प्यानलका उपाध्यक्ष बलबहादुर कुँवरले तीनसय १३ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । बोहरा पक्षका उपाध्यक्ष पदमा भीमबहादुर विष्टले ३ सय ६ मत ल्याएर प’रा’जित भएका छन् । सचिवमा पनि शाह पक्षकै भीमबहादुर रावल (कालोटोपी) चारसय ५३ मतले विजयी भएका छन् ।
माओवादी पृष्ठभूमिबाट एमालेमा रहेका सचिव पदका अर्का उम्मेद्वार आदर्श साउँदले दुईसय ५ मत ल्याएर परा’जि’त भएका छन् । अध्यक्षमा विजयी बोहरा र सचिवका विजयी रावल मंगलसेन नगरपालिका–८ र ९ वडावासी (साविकको वलीगाउँ गाविसका) हुन् ।
उपसचिवमा टोपबहादुर शाही दुईसय ४४, प्रेम खत्री दुई २१, लिलाराज केसी एकसय ३९, शेरबहादुर बुढा ७२ र नवराज साउँदले ६२ मत प्राप्त गरेर परा’जि’त भएका छन् ।
निर्वाचनमा विजयी हुने पदाधिकारी मध्येमा संघीय निर्वाचन क्षेत्र १ मा एक उपसचिव बाहेक सबै क्षेत्र नं. २ का रहेका छन् । तीन दिनसम्म सर्वसम्मतिको प्रयास गर्दा सहमति नभएपछि निर्वाचन प्रक्रिया अबलम्बन गरिएको हो । वडाबाट प्रतिनिधि र आयोजक गरेर एमाले अछाममा सातसय ६२ मतदाता रहेकोमा सातसय ५० जनाले मतदान गरेका छन् ।
भूगोल (स्थानीय तह), महिला, दलित, अल्पसं’ख्यक, जनजाति र अपां’गको मतगणना आज रातिबाटै हुने निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ । एमाले अछाममा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र उपसचिवमा पाँच पदाधिकारीसहित एकसय ५ जना निर्वाचित हुनेछन् ।
Prevगृह जिल्लामै नराम्रोसँग पछारिय भिम रावल ?
Nextआज पुष २९ गते विहिवारको भाग्य तपाईको राशीफल कस्तो होला ?